Ardey ka qalin jabisay Iskuullada Ahlu-sunna Wal-jamaaca ee Galgacyo oo deeqo wax barasho ka helay Waddamada Yemen iyo Masar | Almaschool's Blog
Ardey ka qalin jabisay Iskuullada Ahlu-sunna Wal-jamaaca ee Galgacyo oo deeqo wax barasho ka helay Waddamada Yemen iyo Masar
Ardey aad u fara badan oo ka qalin jabisay Iskuullada ay gacanta ku hayaan Ahlu-sunna Wal-jamaaca ee Magaalada Gaalkacyo ayaa waxay wax-barasho bilaash ah ka heleen waddamada Yemen iyo Masar.
Ardeydaan ayaa gaaraya ilaa 30meeyo waxayna ka kala bexeen Iskuullada ay gacanta ku hayaan dalladda Culimada Ahlu-sunna Wal-jamaaca.
Adeydaan ayaa marii ay u baxayeen waddamada Yemen iyo Masar ayaa waxaa loo dhigey xaflad sagoontin, waxaana ka qayb galay Xafladdoodaaas Maamullada Iskuullada, Macalimiinta iyo weliba qaybaha Bulashada kala duwan.
Shiikh Muxayadiin Yuusuf Barre oo ah Culimada Waa weyn ee Ahlu-sunna Wal-jamaaca gacantana ku haya Iskuullada Ahlu-sunna Wal-jamaaca ee Magaalada Gaalkacyo ayaa madashaas ka hadlay, wuxuuna ardeyda kula dardaarmey in ay sifiican wax u soo korarsadaan, ilaashadaanna caqiidadooda saxda ah, oo aysan was waasin Wahaabiyada meel kasta ayey adduunka ka joogaane.
Waxaa sidoo kale madasha sagootinka ka hadlay Macallimiintii iyo waaridiintii halkaas isugu yimid, iyagoo dhammaan ammaan u soo jeediyey Maamullada Iskuullada hoos yimaada Ahlu-sunna Wal-jamaaca dadaallada ay muujiyeen, waxay sidoo kale la dardaarmeen Ardeyda deeqaha wax barasho ka heshay waddamada Yemen iyo Masar.
Waxaa iyagana ka hadlay halkaas ardeyda deeqaha heshey waxayna ammaan u soo jeediyeen Maamulka Iskuullada Ahlu-sunna Wal-jamaaca, oo sheegeen la�aantood in aysan waligood helin wax wax-barasho ah.
Waxay sidoo kale sheegeen in ay waddankooda ay wax u soo baranayaan, iyagoo sheegey in alle idinki ay iska ilaalin doonaan Khawaarijta iyo Wahaabiyadaba, waxayna ballan ku qaadeen in ay markii ay wax soo bartaan, ay shaqada ugu horreeya ee ay qaban doonaan ay noqon doonto la dagaallanka Khawaarijta iyo Wahaabiyadaba.
Posted by daladda waxbarasho ee al-ma'muun on October 3, 2010 at 2:35 am
Previous Entry: xafiiska ardayda ahlusunna waljamaaca ee yemen oo xariga lagajaray maanta.
Next Entry: Qaar ka tirsan ardaydii joogtay Gobolka mukala ee jaamacada Al-Ahqaff University oo shalay soo gaaray magaalada Tariim